Candy · Novambra 2012 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Novambra, 2012
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Novambra, 2012
Afrika Mainty13 Novambra 2012
Tamin'ny 5 Oktobra 2012, mpianatra efatra avy tao amin'ny Anjerimanontolon'ny Port Harcourt any Nizeria no nodarohana ary nodorana velona noho izy ireo voalaza fa nangalatra finday blackberry sy solosaina filanja. Ny herisetra nahafaty ireo mpianatra ireo dia niteraka adihevitra sy fihetsiketsehana tamin'ny aterineto mba hanoherana ny fitsaràm-bahoaka any Nizeria.
Bahrain: Iza no naheno ny fanapoahana baomba ary iza no niharany?
Nilaza ireo manamboninahitra ao Bahrain androany fa mpiasa vahiny roa no maty ary ny fanintelony naratra mafy nandritra ny fanapoahana baomba dimy samihafa tany amin'ny faritr'i Gudaibiya sy Adliya, any amin'ny renivohitra Manama. Tao amin'ny Twitter, tamin'ahiahy ihany no nandraisana izany vaovao izany niaraka tamin'ny antso ho an'ny vahaolana ara-politika...